Ujongana njani ne-algorithm kaYouTube icinezela umxholo wakho? -YTpals
Thenga abathengi be-YouTube
Thenga i-YouTube Package Deal
Thenga iiHora zokuBheka ze-YouTube
Thenga ukubuka kwe-YouTube
Thenga ukuthanda kwe-YouTube
Thenga ii-YouTube IiNgxelo
Thenga iiSahlulo ze-YouTube
Thenga iiNgxelo zeYouTube
Thenga uVavanyo lweSitayile sikaYouTube
Thenga iYouTube yevidiyo SEO
Thenga iYouTube Graphic Design
Ukubukela i-YouTube Views
Thenga Abasebenzisi be-Instagram
Thenga Abalandeli Abazenzekelayo Kwi-Instagram
Thenga i-Instagram Likes
Thenga ukuthanda okuzenzekelayo nge-Instagram
Thenga ukubuka kwe-Instagram
Thenga i-Instagram Deal Package Deal
Abalandeli bakaTwitch basimahla
Thenga abathengi beTwitch
Thenga iTwitch Channel Views
Thenga Abalandeli bePinterest
Thenga okuthandwa nguPinterest
Thenga iTikTok abalandeli / abalandeli
Thenga ukuthandwa kweTikTok
Thenga iiTikTok Views
Thenga izabelo zeTikTok
Thenga iNkcazo yeTikTok
Thenga SoundCloud Plays
Thenga i-SoundCloud Downloads
Thenga Abalandeli be-SoundCloud
Thenga i-SoundCloud Uthando
Thenga i-SoundCloud Comments
Thenga SoundCloud Reposts
Thenga i-Spotify Plays
Thenga Abalandeli be-Play Spotify
Thenga iSpotify Abalandeli
Imiyalelo yam yexesha elidlulileyo
Fumana ababhalisi beYouTube mahala
Ujongana njani ne-algorithm kaYouTube icinezela umxholo wakho?
Ukufaneleka + Ukwenza umntu = Impumelelo kwiYouTube
Ukujongana ne-algorithm eguquguqukayo kunye nengqongqo kaYouTube ayisiyonxalenye yekeyiki kubathengisi. YouTube, eyonwabela isiseko somsebenzisi ngaphezulu 2 billion, ikwangulo injini yesibini yokukhangela ukubonelela ngezidingo zolwazi lwabantu, njengoko amajelo eendaba edijithali ekhula ngoku. Ngaloo ndlela, inika amandla amakhulu okutsala amathemba kwaye uwaguqulele ekubeni ngabathengi bokwenene. Kodwa ukuqhuba unxibelelwano lweYouTube kunye nokunxibelelana nabaphulaphuli ukuze ufikelele kuphawu oluphezulu lokuthandwa kufuna ukuba ubambe ngamandla i-algorithm yeYouTube, ekhokelwa ziimfundiso zobuntu kunye nokufaneleka.
I-YouTube inemithetho ebekwe kakuhle ebonisa umxholo wevidiyo ofanelekileyo kunye nomntu ngamnye kubasebenzisi abaphantsi kwamacandelo amahlanu: Ikhaya, uKhangelo, uTrendi, iividiyo ezicetyisiweyo, iZaziso, kunye nokuBhaliswa. Ukuba unokulungelelanisa umxholo wakho wevidiyo kunye ne-algorithm yeYouTube, amathuba akho okuphumelela kwiqonga lentengiso yevidiyo anokonyuka ngokuphindwe kabini.
Ngaba ufuna ingcali ye-YouTube yokugqibezela uvavanyo olunzulu lwejelo lakho le-YouTube kwaye ikunike isicwangciso sokusebenza?
Sinikeza ingcali Inkonzo yoVavanyo lweSiteshi seYouTube
Ukulungelelanisa umxholo kunye ne-algorithm yeYouTube
Kubekho iimeko ezininzi apho iYouTube icinezele umxholo wevidiyo ukuba ungaveli kula macandelo kuba engahambelani ne-algorithms yayo. Ukuba unqwenela ukunqanda ividiyo yakho ekubeni icinezelwe yi-algorithm yeYouTube, Nazi iingcebiso ezimbalwa ezikhawulezayo ekufuneka uzijonge.
1. Yenza umxholo ophucula ukubandakanyeka
Kunokuba ngumceli mngeni ukuqhuba ukubandakanyeka kweYouTube, kodwa ngenene awunakuyiphepha ukuba unqwenela ukubonwa eqongeni. I-algorithm yeYouTube imalunga nokuzisa umxholo oxabisekileyo, ofanelekileyo, kunye nowenzelwe abantu. Kunokwenzeka ukuba ibambe nasiphi na isiqwenga somxholo ovuselela intsebenziswano yabaphulaphuli kunye nokuzibandakanya. Ukudala umxholo wentsholongwane kunye neethegi ezifanelekileyo kunye namagama angundoqo anokukunceda ukwandisa amanani akho okubandakanya kwi-YouTube, ukunika i-YouTube isizathu sokugqamisa umxholo wakho phambi kwehlabathi. Umxholo obandakanyekayo wongeza ixabiso kubomi babantu-into ethi uYouTube anqwenela ukuyiphumeza nge-algorithm yayo. Ukuba uzibophelele ekudaleni ukuzibandakanya kunye nomxholo ofundisayo, imizamo yakho yokuthengisa ividiyo ngokuqinisekileyo iya kubonakala kwiziphumo ezinkulu zeshishini.
2. Lungiselela itshaneli yakho kaYouTube ukuze ibonakale
Ukuze uvele kwiziphumo zokukhangela zikaYouTube, kufuneka ubonise i-algorithm kaYouTube onikezela ngayo abantu abayifunayo. Unokunxibelelana nalo mbono ngenkcazo yetshaneli kunye nezihloko zevidiyo, zombini ezo ziyinxalenye ebalulekileyo I-SEO ye-YouTube. Yenza inkcazo yetshaneli yakho-umhlathi okanye emibini- ngokubandakanya amagama angundoqo ahambelana neshishini. Kwakhona, izihloko zomxholo wakho wevidiyo kufuneka zingabi ngaphezu kwe-50 ukuya kwii-60 iimpawu kwaye zibandakanye amagama angundoqo. Oku kuya kunceda i-algorithm yeYouTube ukulandelela itshaneli yakho kwaye ifakwe phantsi kweendidi ezahlukeneyo. Okukhona liphuculwe ngakumbi ijelo lakho, kokukhona emaninzi amathuba okuba livele kwiziphumo zokukhangela zikaYouTube. Ekugqibeleni, inokuphucula kakhulu i-CTR yakho.
3. Gcina ishedyuli yokuposa engatshintshiyo
Inyani yeyokuba i-algorithm yeYouTube inokhetho lwamajelo asebenzayo. Ijelo leYouTube elileleyo, apho umxholo uthunyelwa ngaphandle kokulandela ishedyuli, uhlala usilela ukunyuka ukuya phezulu. Iqonga liqwalasela zombini inani leevidiyo kwijelo lakho kunye nokuphindaphindwa kokuposwa ngaphambi kokuba ubonise abaphulaphuli balo. Ke, isitshixo sokujongana ne-algorithm yeYouTube ecinezela umxholo wakho kukudala kunye nokugcina ishedyuli yokuthumela. Ukwenza njalo kuya kukwenza ubonakale ungaguquguquki kwaye ukwandise amathuba akho okuphumelela. Landela idatha enikezwe nguYouTube Analytics ukupapasha umxholo ngexesha apho abaphulaphuli bakho besebenza kakhulu.
Ngokuqinisekileyo kufuneka ugcine ezi ngcebiso zikhankanywe ngasentla engqondweni ngelixa upapasha umxholo kwiYouTube. Kulungile ukuba uqaphele izinto ezibangela ukuba i-algorithm yeYouTube icinezele umxholo wevidiyo. Ukuba uyakwazi ukuqhuba ukubandakanyeka kweYouTube kunye nokusebenzisana nabaphulaphuli ngomxholo wakho, ngokuqinisekileyo uya kufumana umtsalane owunqwenelayo. Ukufumana ukuzibandakanya kuYouTube ngakumbi, ungasebenzisa isixhobo esinje YTPals, enokukunceda uqokelele ababhalisile beYouTube simahla, izinto ezithandwayo zeYouTube simahla, kunye nezimvo zasimahla zikaYouTube.
Ujongana njani ne-algorithm kaYouTube icinezela umxholo wakho? ngababhali beYTpals, 14 April 2022
Nantsi yonke into ekufuneka uyazi malunga noMakhi weVidiyo ka-YouTube
Ukudala iividiyo ezikhuthazayo ze-YouTube zenziwe ngokukhawuleza Akukho mathandabuzo ukuba ividiyo ilawula umhlaba okwi-intanethi kwezi ntsuku. Iipesenti ezingama-85 zabathengisi zithi ividiyo ibonakalisa ukusebenza ngokukuko ekubambeni ingqalelo kwi-intanethi…
Uyenza njani iVidiyo yakho yeYouTube ukuba ibonakale iNgcali ngakumbi?
Iividiyo zeYouTube zininzi kakhulu kwinani. I-1,300,000,000 isebenzisa iYouTube yonke imihla, kwaye okumangalisa nangakumbi kukuba iiyure ezingama-300 zevidiyo zilayishwa eqongeni yonke imizuzu. Kodwa zingaphi…
Indlela abazali kunye nabaGcini abanokuLukhulisa ngayo uLuhlu lwaBabhalisi beSiteshi seYouTube
Intshayelelo Ukusetyenziswa komxholo wevidiyo kukwixesha lonke eliphezulu ngenxa ye-intanethi. Ngokwezibalo zamva nje, umntu uchitha umndilili weeyure ezili-11 zexesha lescreen kumaqonga amaninzi. Amaqonga e-OTT kunye…
Fikelela kuQeqesho lwaSimahla ngoku
Ikhosi yoqeqesho yasimahla:
Intengiso ku-YouTube kunye ne-SEO yokufumana ukuJongwa kwezigidi ezi-1
Yabelana ngale posti yebhlog ukuze ufikelele simahla kwiiyure ze-9 zoqeqesho lwevidiyo kwingcali ye-YouTube.
Iikhamera ezingcono zaBadali abatsha bakaYouTube
Iindlela ezi-5 eziphezulu zokufumana ababukeli ukuba baphawule kwiividiyo zakho zikaYouTube
Iindlela ezikrelekrele zokusebenzisa iYouTube njengeQonga leNtengiso
Iingcebiso zokucwangcisa iShedyuli yakho yokuPapasha kaYouTube
Yintoni iSkimu soMbala esiLungileyo kwisitishi sakho sikaYouTube?
Ngaba ufuna uncedo lweengcali zeYouTube?
Vumela iingcali zethu zeYouTube zirekhode ziphonononge ngokupheleleyo ijelo lakho njengoko bekubonelela ngemiyalelo ephambili yokuphucula ubuchwephesha kuyo yonke into.
Ewe ndifuna uncedo lweengcali!
Sinikezela ngeenkonzo zeNtengiso ze-YouTube
Iiyure zokubukela zeYouTube
inkonzo Ababhalisi be-YouTube be-50 (i-$ 20) Ababhalisi be-YouTube be-100 (i-$ 30) Ababhalisi be-YouTube be-300 (i-$ 45) Ababhalisi be-YouTube be-500 (i-$ 60) Ababhalisi be-YouTube be-1000 (i-$ 100) Ababhalisi be-YouTube be-2000 (i-$ 180)
Ngeza kwitshathi Ngeza kwitshathi Ngeza kwitshathi Ngeza kwitshathi Ngeza kwitshathi Ngeza kwitshathi
Ukuhanjiswa okuKhuselekileyo kunye nokuBucala
Ukuhanjiswa kuqalwa ngeiyure ezingama-24-72
Ukuhanjiswa KUQHUTYWA yonke imihla kude kube kugqityiwe
UkuThenga ngeXabiso elinye Bulk-Akukho ukuphindaphinda
inkonzo I-1000 Views ye-YouTube ($ 20) I-5000 Views ye-YouTube ($ 60) I-10000 Views ye-YouTube ($ 100) I-25000 Views ye-YouTube ($ 200) I-50000 Views ye-YouTube ($ 350) I-100000 Views ye-YouTube ($ 600)
inkonzo I-100 ithandwa yi-YouTube ($ 13.50) I-200 ithandwa yi-YouTube ($ 20) I-300 ithandwa yi-YouTube ($ 25) I-600 ithandwa yi-YouTube ($ 40) I-1200 ithandwa yi-YouTube ($ 70) I-2500 ithandwa yi-YouTube ($ 140) I-5000 ithandwa yi-YouTube ($ 270) I-10000 ithandwa yi-YouTube ($ 530) I-15000 ithandwa yi-YouTube ($ 790) I-20000 ithandwa yi-YouTube ($ 1050) I-30000 ithandwa yi-YouTube ($ 1550)
Ngeza kwitshathi Ngeza kwitshathi Ngeza kwitshathi Ngeza kwitshathi Ngeza kwitshathi Ngeza kwitshathi Ngeza kwitshathi Ngeza kwitshathi Ngeza kwitshathi Ngeza kwitshathi Ngeza kwitshathi
inkonzo I-10 Iingxelo ze-YouTube eziqhelekileyo ($ 20) I-20 Iingxelo ze-YouTube eziqhelekileyo ($ 35) I-30 Iingxelo ze-YouTube eziqhelekileyo ($ 50) I-50 Iingxelo ze-YouTube eziqhelekileyo ($ 80)
Ngeza kwitshathi Ngeza kwitshathi Ngeza kwitshathi Ngeza kwitshathi
inkonzo Iiyure ze-500 zokubukela i-YouTube ($ 180) Iiyure ze-1000 zokubukela i-YouTube ($ 300) Iiyure ze-2000 zokubukela i-YouTube ($ 450) Iiyure ze-3000 zokubukela i-YouTube ($ 550)
inkonzo I-500 Izabelo ze-YouTube (i-$ 30) I-1000 Izabelo ze-YouTube (i-$ 50) I-2000 Izabelo ze-YouTube (i-$ 80) I-5000 Izabelo ze-YouTube (i-$ 130) I-10000 Izabelo ze-YouTube (i-$ 250)
Ngeza kwitshathi Ngeza kwitshathi Ngeza kwitshathi Ngeza kwitshathi Ngeza kwitshathi
Umntu othile ngaphakathi Kuthengwa
I-YTpals sisisombululo esiPhambili seNtengiso yezeNtlalontle yeshishini kunye neziteshi zakho ze-YouTube. Sinceda abathengi bethu ukuba bafumane ababhalisile ngakumbi, ukujonga, ukuthanda kunye nezimvo ukwandisa ifuthe labo kwi-intanethi.
Ilungelo lokushicilela © 2022 YTpals (ytpals.com). Onke Amalungelo Agciniwe. Sitemap
Ababhalisi beSimahla bakaYouTube
IiNgxelo zeBlogs zangoku
Le webhusayithi isebenzisa iicookies ukuqinisekisa ukuba ufumana amava amahle.